အောင်မြင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှုဟာ ဘ၀ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ အဲဒါက တစ်ခုတည်းသော ဒင်္ဂါးရဲ့ ဖက်နှစ်ဖက်ပါ။ အောင်မြင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှုဟာ ယန္တရားလည်ပတ်မှု စက်ဝန်းအနေဖြင့် လားပါတယ်။ အမြဲတစေ ဆိုတာတော့ မရှိပါ။
ယနေ့ရဲ့ အောင်နိုင်သူက မနက်ဖြန်ရဲ့ အရှုံးသမား ဒါမှမဟုတ်- မကြာသေးခင် မနေ့တနေ့ရဲ့ အရှုံးသမား တစ်ယောက်ပါ။ ပြီးတော့ ယနေ့ရဲ့ဆုံးရှုံးသူဟာ လာမည့်နောက်နှစ်မှာ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ နောက်နှစ်မှာ ချန်ပီယံ ကောင်းကောင်း ဖြစ်နိုင်သူပါ။
ငါတို့တွေက ဒီအရာကို အပြည့်အ၀ အသိဝင်ပေမယ့်- တို့တွေဟာ အောင်မြင်မှုအနိုင်ပွဲကို ဆက်လက် အာသာပြင်းပြကြတာပါပဲ။ ပြီးတော့ အချိန်တွေ ဖြတ်သန်းသွားလာတာနှင့်အမျှ- အခြားသူတွေက မိမိနောက် အစဉ်သဖြင့် လိုက်ပါနေတယ်- ဆိုတာ ငါတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်က သိရှိပေမယ့်လည်း- ဆုံးရှုံး နစ်နာခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုမှာပဲ ဆက်လက်နေထိုင်နေကြတာပါ။
ဘယ်အောင်မြင်မှုကပဲဖြစ်ဖြင့် ဆောင်ယူလာတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ၀မ်းသာကျေနပ်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ခံစားမှုကို- အရင်းခံအားဖြင့် ငါတို့တတွေရဲ့ ego- က ခံစားပျော်ရွှင်တာပါ။ ဓမ္မက အောင်မြင်တာလည်း မဟုတ် ကျရှုံးတာလည်းမဟုတ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဓမ္မဟာ အကောင်းအဆိုး- အမှားအမှန်- အောင်မြင်ခြင်း ရှုံးနိမ့်ခြင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာနှစ်ရပ် ဒွန်တွဲနေမှုကို ကျော်လွန်သွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါက အခြားသူများထက် ဒါမှမဟုတ် အခြားသော တစ်လှေတည်းစီး တစ်ခရီးတည်းသွားတဲ့ အသင်းအဖွဲ့များထက်ကောင်းတဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ- လူသားရဲ့စိတ်နှင့် Ego-က မြူးထူးပျော်ရွှင်ရပါတယ်။
ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်ရံ ငါတို့ရဲ့အောင်မြင်တာက ကြီးမားတဲ့ နှစ်ထောင်းအားရမှုကို ဖြစ်စေတာလား- ဒါမှမဟုတ် သူများတွေ ရှုံးနိမ့်သွားတာက ကြီးမားတဲ့ အားရကျေနပ်မှုကို ဖြစ်စေတာလား- ဆိုတာ ကောက်ချက်ချဖို့ ခက်ခဲလာပါတယ်။
အောင်မြင်မှုက အစွန်းရောက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်များကို သယ်ဆောင်လာတဲ့အတိုင်း- အရှုံးကလည်း အဲဒီလို ပါပဲ။ ယနေ့ရဲ့လူစွမ်းကောင်းများဟာ မနက်ဖြန်ရဲ့လူညံ့များ ဒါမှမဟုတ် ရာဇ၀တ်သားများ ဖြစ်လာတယ်- ဆိုတာ မကြာမကြာ ဘယ်လောက်လောက်မြင်ပြီးပါပြီလဲ?
သူတို့ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ ကျရှုံးတဲ့အခါ- ယနေ့ရဲ့ အသည်းစွဲဆိုတဲ့သူများဟာ မနက်ဖြန်ခါ ပေါက်ကွဲ နေကြပါ တယ်။ ဒီအရာက ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့ဂုဏ်ဒြပ်ရဲ့ ပေးဆပ်ရခြင်းများ၊ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ ပေးဆပ်ရမှု တန်ဖိုးများ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရှုံးသမားနဲ့ပတ်သက်လို့က ဘာများပါလဲ? ငါတို့တတွေဟာ ဆုံးရှုံးသူကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကြောင်းက ဆုံးရှုံးသူတစ်ယောက်မရှိဘဲ အောင်မြင်သူတစ်ယောက် မရှိနိုင်လို့ပါ။ ကမ္ဘာရဲ့အခြား အစိတ် အပိုင်းများမှ အခြား အားကစားအသင်းအဖွဲ့များက ခရစ်ကတ်ကစားခြင်းကို ရပ်တံ့ခဲ့လျင်- အဲဒီအခါ ငါတို့တတွေဟာ ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေလိမ့်မလဲ- ဆိုတာ မှန်းဆစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ ရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ။ အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ် ကျင်းပဖို့ အောင်မြင်သူ ရှိလိမ့်မယ် မဟုတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် တစိမ့်စိမ့်တွေးဆဖို့ ရှုံးသူများ ရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ။ ယှဉ်ပြိုင်မှုက ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို နိုးကြွစေပါတယ်။ သင်ကြားခြင်းမှ- အခြားသူများရဲ့ အတွေ့အကြုံများမှ စွမ်းပကားကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
Swami Vivekananda- ပြောလေ့ရှိတာက ဒီလိုပါ။ “ပေးသူကို စိတ်ကြီးဝင် ဂုဏ်ယူမော်ကြွားခွင့် မပြုဖို့ပါ။ အကြောင်းက သူဟာ ကြိုဆိုလက်ခံဖို့ တစ်ဦးတစ်ယောက် ရှိမှသာလျင် ပေးနိုင်လို့ပါ။ ပေးခြင်းနှင့် ယူခြင်းရဲ့ ဖန်တီးမှုအနုပညာ အချိန်အတောအတွင်း- ပေးသူကို ဒူးထောက်ခွင့်ပြုကြပါစို့။ ရယူလက်ခံသူကို မပြိုလဲစေဘဲ မတ်မတ်ရပ်တည်နေခွင့် ပြုကြပါစို့။ ကမ်းလှမ်းပေးသူက ရယူလက်ခံသူကို တိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတာက ကံထူးတဲ့ ကောင်းချီးမင်္ဂလာပါ။”
တူညီတဲ့သဘောထားမှာတော့- ရှုံးနိမ့်သူအနေဖြင့် အောင်မြင်သူကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုခွင့် ပေးကြ ရအောင်။ ရှုံးနိမ့်သူမရှိဘဲအနေဖြင့် အောင်မြင်သူလည်း ပျောက်ဆုံးသွားမှာဖြစ်လို့ပါ။
တစ်ဦးတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးတဲ့အခါ- ဆုံးရှုံးနေတဲ့အသင်းအဖွဲ့ဝင်များကို လှောင်ပြောင်သရော်ဖို့ဆိုတာ- အပြစ် ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာ- ဒေါသဖြင့် ဝေဖန်ဖို့ဆိုတာ- လူတွေမှာ ရှိကြတာအလုံအလောက်ပါ။ အားကစားနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မမျော်လင့်ဘဲ တွေဆုံရင်ဆိုင်ရလို့ဖြစ်စေ- ဒါမှမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ရန်စဖြစ်စေ- အောင်မြင် ခြင်းရဲ့ ဖန်တီးမှုအနုပညာရပ် ကာလအတောအတွင်း- တကယ်တော့ အရှုံးဆိုင်ရာမျိုးစေ့များကို စိုက်ပျိုးတယ်-လို့ ဆိုတာကတော့- အထင်နှင့်အမြင် တခြားစီသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းက သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဆုံးရှုံးတဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကို ပြန်ရဖို့အလို့ငှါ- ဆုံးရှုံးသူဟာ တကွအတူ ရှိနေပြီးပါပြီ။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုကို စီမံပြီးနေပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ပြန်လာမှုကို စီမံပြီးနေပါပြီ။ ဒါက အသာစီးပြန်ယူခြင်းမတိုင်မီ- ရေစီးကြောင်းကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းမတိုင်မီ- ပြီးတော့ အောင်နိုင်သူဟာ ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ ဘက်ခြမ်းမှာ ဖြစ်တာက အချိန်ရဲ့အကြောင်းတရား တစ်ခုသာလျင်ပါ။
ပေးခြင်းက အောင်မြင်းထိုက်တဲ့အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံကြောင်း အပြည့်အ၀ ယုံကြည်လက်ခံထားပေ မယ့်- ပေါ်ထွက်လာတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကတော့- ဂိမ်းကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားဖို့- ကြည်နူးသာယာဖို့- ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရဖို့- ဒါပေမယ့် ဆုံးရှုံးသူများနဲ့ အောင်မြင်သူများကို မထားရှိဖို့- ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား?- ဆိုတာပါ။
ဒါက အားလုံးသော စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းများနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲများမှာ အမှန်တရားပါ။ ဒါက တကယ် ပဲ စောင့်စားမျော်လင့်တဲ့ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းက ငါတို့တွေဟာ အခြားသူ တစ်ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံးရှုံးစွန့်လွှတ်ရမှု တန်ဖိုးကနေ အနိုင်ရတော့မယ်ဆိုလျင်- ဒါက တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ် တဲ့ အောင်နိုင်မှုသာလျင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ်- ပုံမှန်အမြဲတမ်းဆိုသလို ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာမရှိတဲ့ တစ်စုံတစ်ခု- ဒါပေမယ့် အနာဂတ် (ဆုံစည်းရခြင်းများက ပျော်စရာကောင်းတာသာ မဟုတ်တဲ့နေရာ- အောင်မြင်သူကိုသာ ကျန်ရစ်စေတဲ့ နေရာ- ကျရှုံးသူကိုတော့ ချန်ထားရစ်တာ မဟုတ်တဲ့နေရာ)- နဲ့ပတ်သက်လို့ ငါတို့တွေက တွေးထင်နိုင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ခု- အလုံးစုံ ဒါမှမဟုတ် အကြွင်းမဲ့ အောင်ပွဲအတွက်- လူတိုင်းဟာ ပေါက်မြောက်အောင်မြင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လောက်ကောင်းပါရဲ့။
ပြီးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားတတ်ကြွစေတဲ့ အူမြူးဘ၀င်ခိုက်တဲ့ ခံစားချက်ဆိုင်ရာ ဖြစ်နိုင်ခြေအခွင့်အလမ်းဟာ ရှိနေတုန်း ရှိနေဆဲပါ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Wednesday, February 22, 2012
အပြစ်ရှိသော ခံစားမှုက သင့်ကို သေစေနိုင်တယ်- ဆိုတာ
အပြစ်ရှိခြင်း, စိတ်မသန့်ခြင်း, လိပ်ပြာမလုံခြင်းဟာ ငါတို့တွေရဲ့ဘ၀နဲ့ပတ်သက်လို့ အမျိုးမျိုးသော အချိန်တွေမှာ ငါတို့တတွေအားလုံးက ခံစားမိပြီး သတိထားမိပြီး ဖြစ်တဲ့- စိတ်ထိခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအရာက ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ စွမ်းအားများအတွက်- ကြီးမားတဲ့ပမာဏအနေဖြင့်- ငါတို့ကို တဖြည်းဖြည်းလုံးပါး ပါးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်- ၀မ်းနည်းညှိုးငယ်စေနိုင်- လုယက်နိုင်တဲ့- စိတ်ခံစားမှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အပြစ်ရှိခြင်းကို ကျော်လွှားချိုးနှိမ်နိုင်ဖို့ အလို့ငှါ- ပထမဆုံး မိမိက ငါတို့တတွေ ဘာ့ကြောင့် အပြစ်ရှိခြင်းကို ခံစား သတိပြုမိသလဲ- ဆိုတာ နားလည်းသဘောပေါက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ် လာတာနှင့်တပြိုင်နက်- ဒီပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ လွယ်ကူလာပါတယ်။
ငါတို့တတွေက အဲဒါကို ပြုလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့်- တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလိမ့်မယ်ထင်တယ်- လို့ ငါတို့ စဉ်းစားတဲ့ ဘယ်အချိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ငါတို့တွေက ဆက်လုပ်သွားခဲ့ပြီး အဲဒါကို လုပ်ခဲ့တာမျှ သာ ဖြစ်ပေမယ့်- တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလိမ့်မယ် မထင်- လို့ ငါတို့တွေ ယူဆတဲ့ ဘယ်အခါ ပဲဖြစ်ပါစေ- ဒို့တတွေဟာ အပြစ်ရှိခြင်းကို ခံစား သတိပြုမိကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အပြစ်ရှိခြင်း အားလုံးရဲ့ အစပျိုးနေတဲ့နေရာ ကတော့ ငါတို့တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့တွေရဲ့ မိဘများ ဆရာသမားများနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းများက ဒို့တတွေကို သွန်သင်ပြသပေးပြီးတဲ့- ဒီလိုမှ မဟုတ် မွေးရာပါဖြစ်တဲ့ အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေ ငါ့တို့မှာ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီအကောင်းဆုံးကို ငါတို့တွေက မစွန့်ဘဲ စွဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားလျင်- ငါတို့တွေကို ပျိုးထောင်လေ့ကျင့် ပုံစံသွင်းပေးပြီးတဲ့အတိုင်း ဒို့တတွေရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို ငါတို့တွေက ထမ်းဆောင်ခဲ့လျင်- အပြစ်က မရှိပါ။
ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်- လို့ ငါတို့ရဲ့ အယူအဆများနှင့် ငါတို့ လုပ်ခဲ့တဲ့အရာများ အကြား - ခြားနားကွာဟချက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ- ခြားနားချက် ဒါမှမဟုတ် ကွာဟချက်က ငါတို့တွေကို စိတ်မ ချမ်းမြေ့စေအောင် ၀မ်းနည်းညှိုငယ်စေအောင်ပြုလုပ်လျက်- အပြစ်ရှိခြင်းအထဲ ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။
အပြစ်ရှိခြင်းဟာ အပြင်ဘက်ကလာတဲ့ အခြေအနေ ဒါမှမဟုတ် အပက ပေါက်ရောက်လာတဲ့ စနက်မီးပွား က ပြုလုပ်တာ တကယ့်အနည်းငယ်သာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အားလုံးသော အပြောင်းအလဲတွေက ငါတို့ကို အကျိုးသက်ရောက်စေတာတော့ မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့် အမှားနဲ့အမှန် တာဝန်နဲ့အခွင့်အရေး- ပြီးတော့ အကောင်း,အဆိုး အရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သန်မာ အားကောင်းတဲ့ ယုံကြည်မှု ငါတို့တတွေမှာ ရှိခဲ့လျင်- ငါတို့တွေရဲ့ယုံကြည်မှုများကို ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြင့်- ငါတို့တတွေဟာ ဒေါသနဲ့ဖြစ်စေ ရန်လိုမှုဖြင့်ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် အပြစ်နဲ့ မချင့်မရဲဖြစ်စေ တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်- ဆိုတာ ဖြစ်သွားပုံပေါ်ပါတယ်။
အပြစ်ရှိခြင်းကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကတော့ ငါတို့တွေဟာ ပထမဆုံး အမှားနဲ့အမှန် အကောင်းနဲ့အဆိုး လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြွင်းမဲ့ဆို တာတော့ မရှိပါ။
သီးသန့်အချိန် ဒါမှမဟုတ် နေရာသီးသန့်တစ်ခုမှာ အကောင်းလို့ ယူဆရတဲ့အရာတွေဟာ အခြား အချိန် ဒီလိုမှမဟုတ် အခြားနေရာတစ်ခုမှာတော့ အဆိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့တွေရဲ့ အသက် ၂-နှစ်အရွယ်မှာ မိဘတွေကို မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံဘဲ တွယ်ဖက်ထား တာဟာ ငါတို့တွေအတွက် သဘာဝကျတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက် ၄၀-အရွယ်မှာ အဲဒီလို ဆက်လက်ဖက်တွယ်ထားမယ်ဆိုလျင်တော့ သိသိသာသာ တစ်ခုခုဟာ မှားယွင်းနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်က အခြားသူကို သတ်ဖြတ်လျင် ဒါက ရာဇ၀တ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တာဝန်အရ ရဲသားတစ်ယောက်က ရာဇ၀တ်သားတစ်ယောက်ကို သတ်ဖြတ်လျင် ဒါမှမဟုတ် စစ်သားတစ်ယောက်က ရန်သူ့တပ်သားကို သတ်ဖြတ်လျင်- သူ့ကို ဆုတံဆိပ်ဖြင့် အသိအမှတ်ပြုသင့်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အပြစ်ရှိမှုကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့- ငါတို့တွေဟာ ငါတို့တွေက အပြစ်ရှိတယ်-လို့ ခံစားနေရတဲ့ အရာဟာ ဘာလဲ- ဆိုတာကို ပထမဦးစွာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့အခါ- မိမိက မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့အရာကတော့- ဘာကိုမျှမပြု လုပ်ခြင်း အရေးယူဖို့ပျက်ကွက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့တွေဟာ ငါတို့ရဲ့အပြစ်ရှိခြင်းဆီသို့ ဦးတည်ပြီးတဲ့ အမှားအယွင်းကို အသိအမှတ်ပြုလျင်- အဲဒါကို မှန်ကန်အောင်ပြုပြင်ပေးခြင်းအတွက် ငါတို့တွေ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်တဲ့ အဲဒီအမှားကို ငါတို့တွေက လက်ခံလျင်- ပြီးတော့ မှားယွင်းမှုအတွက် လူသားတွေ ဖြစ်တယ်- ဆိုတာကို လက်ခံလျင်- လက်ခံခြင်းမှတစ်ဆင့် ငါတို့တွေရဲ့ အပြစ်ရှိခြင်းကို လျှော့ချခြင်း လျော့နည်းသွားစေခြင်း အတွက် ငါတို့တွေ ဆက်လက် စခန်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ငါတို့တွေက ဘယ်ဖြေရှင်းမှုကိုမှ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ အပြစ်ရှိခြင်းကို သယ်ဆောင်ရမည့်အနေဖြင့်- ငါတို့ရဲ့အမှားတွေကို ၀န်ခံတာလည်းမဟုတ် လက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဆိုလျင်တော့ မိုက်မဲရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက ဂီယာကို မူလအနေအထားမှာ ထားပြီး လီဗာကို နင်းခြင်းဖြင့်- ငါတို့ရဲ့ကားကို တပ်ဆင်ထားခြင်း ကဲ့သို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ငါတို့ကို တစ်နေရာရာကိုမှ မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ- ငါတို့တွေဟာ စွမ်းအင် အချို့ကို ဆုံးရှုံးပြီး- တိုက်ရိုက် ဒါမှမဟုတ် ပကတိနီးပါး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းခြင်းမှာ အဆုံးသတ်တယ်- ဆိုတာက ကျိန်းသေပါပဲ။ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြေရှင်းခြင်းကို ခေါ်ယူလာခြင်းမရှိဘဲ ချန်ရစ်ထားတဲ့- အပြစ်ရှိခြင်း က လေထုကို ညစ်ညမ်း စေပါတယ်။
ဘ၀ဟာ အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ စီမံချက်များနှင့်အညီ ဖော်ထုတ်ဖွင့်ဟထားပါတယ်။ ငါတို့တတွေဟာ ပြဇာတ်တစ်ခု မှာ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးမျှသာ ဖြစ်ပြီး- အခြားအချို့သူတွေကတော့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာများ ဖြစ်ပါ တယ်။ မြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်ဖြင့် ငါတို့တတွေဟာ ငါတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်ခုလုံးကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားနိုင်လျင်- ဒါက အပြစ်ရှိခြင်းကို- ပြီးတော့ နေ့စဉ်ဘ၀အကြောင်းတရားတွေအပေါ်မှာ ငါတို့ကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ ငါတို့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ ခံစားမှုတပြုံလုံးကို- ပယ်နှုတ်ဖို့ အတော်ကလေး လွယ်ကူလာ ပါတယ်။
ပကတိ စကားရပ်အရ- မှားယွင်းမှုနှင့်မှန်ကန်မှုဖြစ်တဲ့အရာကို နားလည်သဘောပေါက်လာပါ တယ်။ ပြီးတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား မရှိတဲ့ အပိုင်းအခြားဖြစ်တဲ့ အရာကိုလည်း နားလည်လာပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒါတွေနှင့် ကိုက်ညီအောင် စပ်ဆက်လာပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Sunday, February 12, 2012
ကျရှုံးတာထက် အောင်မြင်တာကို ပါဝင်ယှဉ်ပြုင်ကစားရတာက အကောင်းဆုံးပါ။ အပြင်မှာ သံချေးတက်တာ ထက် အပြင်မှာ တာရှည်အသုံးခံတာက အကောင်းဆုံးပါ။ အကောင်းဆုံးအတွက် ရည်ရွယ်တာနှင့် အောင်မြင် မှုမှာ မကျရှုံးတာက အကောင်းဆုံးပါ။ မိမိက မိမိကိုယ်ကိုယ် အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းမှာ ပို့ထားတဲ့အခါ- ဒါက သိခွင့်ရဖို့ ရှိရင်းစွဲ ပါရမီစွမ်းရည်ကို ဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်။
ဘယ်သူကိုမှ ဘယ်သောအခါမှ ဒေါသဖြစ်ခဲ့ပြီး စိတ်ဆိုးခဲ့ပြီး မဟုတ်တဲ့သူတွေဟာ- ဘ၀မှာ အောင်မြင်ဖြစ် ထွန်းခြင်းမရှိ ဆိုတာပါ။ အလားတူပါပဲ။ ဘယ်တုန်းကမှ မဆုံးရှုံးဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ - အောင်မြင်မှု ရဲ့ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုကို ဘယ်သောအခါမှ တွေ့ရှိရမှာ မဟုတ်ပါ။
အောင်မြင်မှုမှာ ၀မ်းသာအားရစရာရှိတယ်ဆိုတာ- ဆုံးရှုံးမှုမှာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာနာကျင်မှုရှိတယ်ဆိုတာ- သံသယမရှိပါနဲ့။ ပြီးတော့ မိမိက နှစ်ခုလုံးကို လက်မခံလျင်- ဒါက ကမ်းပါးတစ်ဖက် ရှိဖို့ မြစ်ကို မျော်လင့်နေ သလို ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ကို ကမ်းပါးနှစ်ဖက်က ထိန်းချုပ်ဟန့်တားထားတယ် မဟုတ်ပါလား?
အောင်မြင်မှုမှာ- မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းပတမ်း ခံနိုင်မှု၊ အောင်မြင်မှုကို ဇောင်းပေး ထားတဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်- ဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ရှုထောင့် လေးမျိုး ပါဝင်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမှာတော့- ကောင်းမွန်တဲ့ နှလုံးသားခံစားချက်၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုကို တည်ဆောက်ခြင်း- ဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အမာခံကျောရိုး သုံးခုအပေါ်မှာ ရပ်တည်ထားတာပါ။ အခက်အခဲ ဖိစီးမှုဒဏ်ရဲ့ အခိုက်အတံ့များမှာတောင်- ကောင်းမွန်တဲ့ နှလုံးသားခံစားချက်ဆိုင်ရာ ဖန်တီးမှု အနုပညာကို သင်ယူရပါ့မယ်။
ဘ၀ရဲ့အရည်အသွေးကောင်းခြင်း ကြန်အင်လက္ခဏာဟာ- မိမိရဲ့အပြောင်းအလဲမရှိတဲ့ တစ်တမတ်တည်း ဖြစ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကောင်းခြင်း အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိက ကောင်းကျိုးရဲ့ အနေအထား တစ်ခုမှာ စိတ်ခံစားမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဆိုင်ရာ အနုပညာ ( အဲဒါမျိုး သိစိတ်ရဲ့ အခြေအနေကို ရှာဖွေခြင်း) ကို ကျွမ်းကျင်ရပါ့မယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်များရဲ့ အခိုက်အတံ့များမှာ- မိမိ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်အပေါ်- မသိစိတ်အရ စိတ်ကိုယ်၌ ကိုယ်က ကျိုးကြောင်းညီညွတ်ကြောင်း သက်သေပြလေ့ ရှိပါတယ်။
ခရစ်ကတ်မှာတော့ တုတ်ချောင်းများ ပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါ- အသစ်အားကစားသမားများက ကြီးမားတဲ့ ဖိစီး မှုအောက်မှာ ဖြစ်ကြရပါတယ်။ အတိတ်ကျရှုံးမှုများက မျက်မှောက်အခြေအနေများကို လွှမ်းမိုးပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငါတို့ဟာ ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်နေတာမဟုတ်ဘဲ- အတိတ်မှာ နေထိုင်နေကြတာပါ။
ခရစ်ကတ်အားကစားသမားများနဲ့အကျွန်ုပ်ရဲ့ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုအရ- အကျွန်ုပ် သူတို့ကို ပြောတာက - သူတို့ဟာ ဖိအားအောက်မှာ ဖြစ်ကြတဲ့အခါ- သူတို့ဟာ သိစိတ်အရ သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပံ့ပို့ သင့်တယ် ဆိုတာ- ဒါပေမယ့် အတိတ်ကိုတော့ မဟုတ်- ဆိုတာကိုပါ။ မိမိက အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ? ဒါဟာ မိမိက ရှိသင့်တဲ့ တာဝန်နဲ့စည်းကမ်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်ဖို့ သင့်ရဲ့ကတိပေးပြီးတဲ့အလုပ်မှ သင့်ရဲ့အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပါ။ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ အတိတ်က ကျရှုံး မှုကြောင့် ရရှိခဲ့တဲ့ပညာနှင့် သင့်ရဲ့အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပါ။ ခရစ်ကတ်မှာ- အထူးဖြစ်တဲ့ အားကစား သမားတစ်ယောက်က- ကြီးမားတဲ့ ဖိအားအောက်မှာ ဖြစ်ပြီး ကျရှုံးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ- ဒီအပြင် အားကစား သမားက ဘယ်လိုပြန်လည် ခုန်ထွက်ရမလဲ- ဆိုတဲ့ ဥပမာဖြင့် သင့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ရပ်ထဲမှာ ပြန်လည်သတိရပါ။
သင့်မှာ ပွဲမတိုင်ခင်မှာတောင်- အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ သက်ဝင်လှုရှာတဲ့ ဒီရည်ညွန်းကိုးကားချက်တွေ ရှိသင့်ပါ တယ်။ မိမိက အထွတ်အထိပ်အခြေအနေမှာ ရှိဖို့ မိမိရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကို- အထွတ်အထိပ်အခြေအနေမှာ ရှိဖို့ မိမိရဲ့ခံစားချက်ကို- အထွတ်အထိပ်အခြေအနေမှာ ရှိဖို့ မိမိရဲ့စိတ်ကို- ပုံစံသွင်း လေ့ကျင့်ပေးရပါ့မယ်။ ဤကဲ့ သို့သော အထွတ်အထိပ်အခြေအနေမှာ- စွမ်းအားဆိုင်ရာ ခြားနားတဲ့ အရည်အသွေးကောင်းများဟာ ထွက်ပေါ် လာပြီး မိမိရဲ့ အပြုအမူကို လွှမ်းမိုးလာပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ဟာ အဲဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ဒူပေနာပေ အကြမ်းခံနိုင်ရပါ့မယ်။ အနှောင့်အယှက် အပေးမခံရဖို့ အလို့ငှါ- မိမိက စိတ်ကို လေ့လာသင်ကြားပြီး တန်ဖို့းထားရပါမယ်။ သင်ဟာ အဲဒါကို တန်ဖိုးထားတာနှင့် တပြိုင်နက်- လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ အဲဒီလို အပြုအမူမှတစ်ဆင့် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုပ် ဆောင်ချက်အပြုအမူများ ဟာ သင့်ရဲ့တန်ဖိုးများဆိုင်ရာ ချဲ့ကားခြင်း သက်တမ်းတိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆုံးမှာတော့ မိမိကလည်း- ကျရှုံးမှုဟာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် မြေသြဇာဖြစ်တယ်- ဆိုတာ နားလည်ရ ပါ့မယ်။ အမှန်က အောင်မြင်မှုအတွက် ကျရှုံးမှုများသို့ ရွှေ့ဆိုင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရှုံးမှုကို မကြောက်ပါနဲ့။ ကျရှုံးမှုမှ သင်ယူပါ။
ကျရှုံးမှုမှာ အောင်မြင်မှုများစွာအတွက် နည်းနာလမ်းစများ ရှိပါတယ်။ စိုးရိမ်ခြင်း ကြောက်လန့်နေခြင်းဖြင့်- သင်ဟာ လေ့လာသင်ကြားမှုကို လွဲချော်မျက်စိမှောက်သွားပါတယ်။ သို့ဖြစ်လင့်ကစား လေ့လာ သတိပြုစောင့် ကြည့်ပါ။ ကျရှုံးခြင်းဖြင့် ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါနဲ့။ ဤကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် လေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းဖြင့်- မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ကျရှုံးမှုဟာ မိမိရဲ့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့ တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်လိမ့်မယ်သာလျင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်းသစ်ခြင်းမှာ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖန်တီးယူပါ။ အကြောင်းက အဲဒါက သင့်ကို အားပေးတိုက်တွန်းတဲ့ အရာနှင့် လှုံ့ဆော်တဲ့အရာ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းဟာ ဆုံမှတ်ထားခြင်းမှ- ကျင့်သုံးခြင်းမှ- လှုံ့ဆော်ခြင်း မှ ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
မိမိကပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရာ အားလုံးကတော့- သိစိတ်မှာ တစ်သမတ်တည်းဖြစ်တဲ့ အကောင်းဆုံးဝီရိယကို ထားရှိဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုနဲ့ကျရှုံးမှုဟာ တစ်ခုတည်းသော ငွေဒင်္ဂါးရဲ့ ဖက်နှစ်ဖက်ပါ။ မိမိက ထားရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး ဘယ်အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကိုမဆို- မတူထူးခြား တစ်မူထူးပြားတဲ့ အချိန်များမှာ- အောင်မြင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှုနှစ်ခုလုံးကို သင်ဟာ တွေ့ကြုံရပါလိမ့်မယ်- ဆိုတာပါပဲ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Wednesday, February 01, 2012